Posted on मार्च 9, 2010 by kedarkharel
भीम के.सी. कुवैत
कुरा संघियताकै गरौं । संघियतामा जानुमा मेरो विमती होईन। तर संघियतालाई जुन रुपमा व्याख्या गरिएको छ। जुन रुपमा जनतालाई सपनाको लड्डु वाँडिएको छ । विमती त्यसमा मात्र हो, जनताका गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि सबै समस्या संघियतामा गए पछि पुरा हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ। के संघियता जादुको छडी हो र ?के संघियता रामवाँण नै हो र समाधान ?त्यहाँ पुग्ने वित्तीकै सबै कुरा उपलब्ध हुने । यो सबै भ्रमको खेती हो र मेरो विमती पनि यसैमा हो।
यदि हाम्रो देश हाँक्ने नेताहरु सवल र सक्षम छन् । अन्तरात्मा देखी नै नेपाल र नेपालीको हित गर्नको लागि राजनीतिमा लागेका हुन भने सबै पर्टीले देश र देशवासीकै लागि राजनीति गरेका हुन भने व्यवस्था चाहे जुनसुकै होस्। उनिहरु आफ्नो सामर्थ्यता आफ्नो कौशलता जुन सुकै व्यवस्थामा पनि देखाउन सक्छन्। के अहिले हैन संघियतामा गएपछि म मेरो कुशलता देखाउँछु भन्न मिल्छ ? के केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा तपाईको हातमा, तपाईको बुद्धिमा कसैले रोक लगाएको छ र ? तपाईलाई भ्रष्टचार गर्न जथाभावी मनपरी बोली हिंड्न मनपरी गरि हिंड्न मिल्ने अनि गरीब निमुखा जनताको समस्याको लागि संघियता मै जानु पर्ने ? के साँच्चै गरीब निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्न नै संघियको राग अलापिएको हो त? कदापि हैन। संघियतामा जाँदैमा सबै समस्याहरु समाधान हुन्छन्, जनताको जीवनस्तर हवात्तै उकासिन्छ। गरीब निमुखा कोही पनि रहँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ। के पुर्व सोभियतसंघ, कंङगो, इथोपिया लगायत अधिकाँश अफ्रिकन राष्टको इतिहाँस साक्षी छैन र ? इतिहाँसबाट हाम्रा नेताहरुले कहिले सिक्ने ? अथवा उनिहरुले जानेर पनि अन्जान बन्न खोजिरहेछन्। के संघियता अंगिकार गरेका अफ्रिकन राष्टका आफ्ना भू-भागहरु अलग राष्टमा परिणत भएका छैनन ?अझै तपाईहरु आत्मा निर्णयको अधिकारको कुरा गर्नु हुन्छ। के आत्मा निर्णयको अधिकारले कुनै संघिय प्रान्तलाई अलग्गै हुने वा छुट्टै राष्ट बनाउने वा छिमेकी राष्टमा विलय गराउने सम्मको अधिकार हुँदैन र ?कतिपय अफ्रिकन मुलुकहरुमा यस्तो सम्म भैसकेको छ। नेपालमा हुँदैन भन्न सकिन्छ र? नेपालमा बसेर नेपालको नागरिकता अंगिकार गरेर पनि हामी नेपाली होइनौ भन्ने मुठ्ठीभर शासकहरुको हातमा आत्मा निर्णयको अधिकार सहित एक मधेस एक प्रदेश सुम्पीएको खण्डमा के त्यो संघिय राज्य भोली भारतमा विलय नहोला भन्न सकिंदैन। इतिहाँस साक्षि छ कतिपय देशहरुमा यस्तो भैसकेको छ। जुन नेपालको परिप्रेक्षमा पनि नहोला भन्न कता सकिंदैन।
ईश्वरले हाम्रा नेताहरुलाई सद् बुद्धि दिऊन।
« लैङ्गिक विभेद विरुद्ध कुवेती महिलाहरु जुरमुराए राजनीतिक खेलाडी गिरिजा बाबुलाई दिल्ली लैजाने तयारी! »
R.B.Budhathoki, on मार्च 10, 2010 at 12:34 बिहान said:
के संघियता रामवाँण नै हो त? ramro lagyo,sandarbhik chha keep it long…………….